ဆောင်းရာသီအခါသမယနှင့် သက်ဆိုင်တာလေးတွေပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဆောင်းရာသီအခါသမယနှင့် သက်ဆိုင်တာလေးတွေပါ။
Posted by ခင်ခ on Dec 4, 2012 in Health & Fitness | 23 comments
မြန်မာပြည် ဆောင်းရာသီကိုရောက်တဲ့အခါ နေရာဒေသ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတော့ မတူညီကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊ ဆောင်းရာသီမနက်ပိုင်း တစ်ချို့ဒေသတွေမှာ အအေးလွန်ကဲပြီး၊ တစ်ချို့ဒေသတွေကတော့ အေးရုံဆိုမျှရှိတတ် ကြပါတယ်၊ တစ်ချို့ဒေသတွေမှာတော့ ချမ်းလှအေးလွန်လှပေါ့။
တိုင်းရင်းဆေးအယူအဆတွင် ဆောင်းရာသီ၌ ပြင်ပလောကဗဟိဒ္ဓတွင် အေးချမ်းနေသောအခါ ထိုအအေး ဓာတ်၏ ပတ်ဖွဲ့မှု့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားရှိမွေးညင်းပေါက်များ ကျဉ်းပြီးကျုံသွားသဖြင့် ကိုယ်တွင်းအပူ အခိုးအငွေ့များ အပြင်မထွက်နိုင်ဘဲ ပိတ်လှောင်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်ကာ ကိုယ်တွင်းအပူချိန် တက်လာတတ် ပါသည်။ ထိုကြောင့် အလွန်းအေးလို့ အပြင်မှာမြူနှင်းကျချိန် ပါးစပ်ဟလျှင်ပင် အာခံတွင်းမှ အခိုးအငွေ့များ ထွက်သည်ကိုမြင်တွေ့ရနိုင်တာပါ။
အခိုးငွေ့အထွက်နည်းပြီး မွေးညင်းပေါက်များပိတ်သဖြင့် အရေပြားခြောက်သွေ့ရင် အသားပပ်သည် ဟုအများ ကပြောကြတယ်၊ အလှဆီခေါ်ပူသည့်အဆီတစ်မျိူးလိမ်းပြီး ဆောင်းတွင်းအအေးကိုက်နာ အသားကွဲအက်ခြင်း ကိုကာကွယ်ကြတယ်၊ တစ်ချို့ကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်းဖြင့် ချွေးထွက် အောင်လုပ်ပြီး အရေပြားအစိုဓာတ်ရအောင်လုပ်ကြတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ အပူများချွေးအဖြစ် ပြင်ပသို့ ထွက်သွားလျှင် ကိုယ်အတွင်းအပြင် အပူအအေးမျှတပြီး နေထိုင်ကောင်းမွန်ကျန်းမာစေပါတယ်၊ ချွေးမထွက် သောသူများမှာ ကိုယ်တွင်းအောင်းနေသောအပူများကြောင့် ဆောင်းတွင်းတွင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ သလိပ်တံတွေးပျစ်ခြင်း၊ ဆီးပူခြင်း၊ ဆီးသွားများခြင်း၊ ရင်ပူရေငတ်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းကွဲခြောက်ခြင်း၊ သွားနှင့်သွားဖုံးတွင် အပူကန်ခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပွားခံစားရလေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးမထွက်လျှင် ဆီးသွားများသည်မှာ ဓမ္မတာဖြစ်ပြီး ရောဂါမဟုတ်ပါ၊ အတွင်းတွင် လွန်ကဲသော ပိုသောအပူကို ဆီးမှထုတ်ပစ်ခြင်းကြောင့် ဆီအပူသွားလျှင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ အပူများပါသွားသဖြင့် ကိုယ်တွင်းအပူလွန်ကဲခြင်းကို လျောချပေးပါသည်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အသက်အရွယ်ကြီးယောက်ျားများသည် ဆီးကျိတ်ကြီးမှု့ကြောင့် ဆီမကြာခဏသွားရလေ့ရှိတတ်တာကိုတော့ သတိပြုရပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းတွင်းမနက်စောစောထပြီး ညသိပ်ထားသောရေနှင့် မျက်နှာသစ်လျှင် ပါးရွှဲ့ခြင်း (မျက်နှာတစ်ခြမ်း လေဖြတ် ခြင်း) ဖြစ်တတ်သဖြင့် အေးသောရေနှင့် မနက်စောစောမျက်နှာမသစ်ရန် သတိထားသင့်ပါတယ်၊ ရေနွေးအနည်း ငယ်ရော၍ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေပူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာသစ်လျှင် အကောင်းဆုံးပါ။
အေးချမ်းသော ဆောင်းရာသီတွင် ခန္ဓာကိုယ်တွင် အပူလွန်ကဲသောအခါ ရင်ဘတ်အတွင်း လုံခြုံစွာနေသော နှလုံးအိမ်မှာလည်း အပူလွန်ကဲ သက်ရောက်မှုကို ခံစားရလေသည်၊ ထိုအခါနှလုံးခုံမြန်လာလေသည်။ ဆောင်း တွင်လူကြီးများသွေးပေါင်ချိန်ကြည့်ရင် ပုံမှန်ထက်သွေးပေါင်ပိုတက်တတ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မူလသွေးတိုးအခံ ရှိသူ လူကြီးများမှာ ဆောင်းတွင်းတွင် လည်ကုတ်၊ နဖူး၊ ဦးခေါင်း စသည်တို့တွင် ချွေးပြန်လေ့ရှိပါတယ်၊ ဆောင်း တွင်းကြီးချွေးပြန်နေတာ မကောင်းဘူးဟု ရှေးလူကြီးများဆိုခဲ့ပတယ်။ ထိုသို့ဆိုခဲ့ရခြင်းက သွေးကြော ကျဉ်း အဆီတက်နေသူ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းသူ၊ သွေးတိုးနှစ်ကြာရှည်စွာရှိသူများ၏ လက္ခဏာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခဏခဏဖြစ်နေရင်တော့ လေဖြတ်နိုင်ဖွယ်ရှိလို့ သတိထားသင့်တယ် ကျန်းမာရေး ဆေးစစ်သင့်တယ်လေ။
ဆောင်းတွင်းအေးသည့်ရာသီမှာ ရင်တွင်းမှာပူနေခြင်း၊ နောက်ကြော လည်ဂုတ်တွင် ပူပြီးနောက်ကြောတက် ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ပြီး မကြာခဏရေငတ်ခြင်း စသည့်ဝေဒနာတွေခံစားနေရလျှင် နှလုံးရောဂါစတင်ဝင် ရောက် လာမည့် ရှေ့ပြေးလဏ္ခာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တိုင်းရင်းဆေးဆရာတွေက ဒီလိုဆိုပါတယ် “ရေငတ်၊ ရင်ပူ၊ မောဟိုက် သူကို ကူညီနိုင်ရေး အချိုပေးလော့´´ နဲ့ “ခြေဆီမထွက် ချွေးခြောက်လျက်နှင့် အက်ကွဲနှုတ်ခမ်း ကြမ်းသည့်အသား ပပ်သူအားလျှင် အချဉ်ပေးလော့´´ ဆိုတယ်လေ။ စာချိုးအရ လူကြီးများ ရေငတ် ရင်ပူ မောဟိုက်သော လဏ္ခာဖြစ်လျှင် ချိုသော၊ အေးသောအစာတွေဖြစ်တဲ့ ကမ္ဗလာသီး၊ လိမ္မော်သီး ဖော်ရည်၊ သင်္ဘောသီးမှည့်၊ ဌက်ပျောသီးမှည့်၊ ပင်မှည့်သီးမှည့်၊ နာနတ်သီးဖျော်ရည်၊ ကြံရည်ချိုချို လေးများ တိုက်ကျွေး သင့်ခြင်းပြုနိုင်ပြီး၊ လူငယ်လူလတ်တွေဖြစ်တတ်တဲ့ ဆောင်းတွင်းတွင် ခြေဆီမထွက်ခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းကွဲအက်ခြင်း များအတွက် သံပရာသီးဖျော်ရည်၊ ရှောက်သီး၊ ရှာလပတ်ရည်၊ မန်ကျည်းသီးဖော်ရည် စသည့်တို့ သောက်သုံး စားပေးသင့်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းပါ။ နောက်ပြီး “နွေ-ချို၊ မိုး-ခါး၊ ဆောင်-ချဉ် စား၊ မှတ်သား အဖြေဓာတ်´´ လို့လည်း ဆိုပြန်ပါသေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ဆောင်းတွင်း အေးသည့်ကာလမှာ အချဉ် ဓာတ်ပါတဲ့ ကင်ပွန်ချဉ်ရွက်၊ မန်ကျည်းရွက်၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ မုန်ညင်းချဉ် စသည်တို့ကို ဟင်းရည်အဖြစ် သောက်သုံး စားသင့်ပါတယ်။
ဆောင်းတွင်းတွင် အအေးဓာတ်ကြောင့် သွေးကြောများအတွင်း စီးဆင်းမှုနှေးကွေးသဖြင့် နံနက်စောစောထ လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် သွေးစီဆင်းမှု့ကောင်းစေနိုင်ပါတယ်၊ လမ်းမလျှောက်သူများမှာ ခြေသလုံးသွေးကြော၊ သွေးပြန်ကြောကြီးများအတွင်း သွေးစီးဆင်းမှု အားနည်ခြင်းကြောင့် ညောင်းညာကိုက်ခဲသော ဝေဒနာများ ခြေနှစ်ဖက်ထုံကျဉ်သော ဝေဒနာများ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ညလုံး အအေးဓာတ်ကြောင့် စောင်ထူ ထူခြုံပြီး ငြိမ်သက်စွာ အိပ်စက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တောင်တင်းအေးခဲနေသော ကြွက်သားများနှင့် အကြော အခြင် များကို ပြေလျှော့ပေးနိုင်ဖို့ နံနက်စောစောလမ်းလျှောက်သင့်တယ်လိုဆိုပါတယ်၊
ဆောင်းရာသီအခါသမယအတွက် စာဆိုလေးတစ်ခုက“စောစောအိပ်ထ၊ ပြုကျင့်က၊ တွင်းပကိုယ်ခန္ဓာ၊ ရောဂါ ခပ်သိမ်းရှောင်ခွာတိမ်း၊ ကင်းငြိမ်းလွန်ချမ်းသာ´´ ဟူသည်နှင့်အညီ စောစောအိပ်ယာဝင် အိပ်ပြီး မနက်စောစော အိပ်ယာမှထပြီး လမ်းလျှောက်လျှင် ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ပြန်လည်ဝေမျှနိုင်ရန် ဆေ့ဗ် ထားလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
လူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ် ဖြစ်တယ်လို့ အားပေးပါတယ်ဗျာ။
တကယ်ကြီးကို အကျိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ..
လေဖြတ်မှာတော့ ကြောက်မိတယ်..ကိုခင်ခ ရေ..
သက်တူရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လဲ ကော်ပီယူသွားခွင့်ပြုပါနော်..
ကိုMobile ရေး ဦးဆုံးကွန်အတွက်ကျေးဇူးနော်။
candle ရေ ကျွန်တော်ပိုစ့်တွေက အများဖတ်ဖို့တင်တာမို့ ကော်ပီဘဲယူယူ လင့်ဘဲပေးပေး ကြိုက်သလိုလုပ်ပါ ခွင့်မတောင်းပါနဲ့ဗျာ။
ကိုခရေ…. ဆောင်းရာသီအတွက် ဒီဆောင်ပုဒ်လေးတွေကိုတော့ မှတ်ထားလိုက်ပြီရှင့်….
ဂိုမတ်ပ် ဆွန်မနီဒါ …
” ရေငတ်၊ ရင်ပူ၊ မောဟိုက် သူကို ကူညီနိုင်ရေး အချိုပေးလော့ ”
့” ခြေဆီမထွက် ချွေးခြောက်လျက်နှင့် အက်ကွဲနှုတ်ခမ်း ကြမ်းသည့်အသား ပပ်သူအားလျှင် အချဉ်ပေးလော့ ”
” စောစောအိပ်ထ၊ ပြုကျင့်က၊ တွင်းပကိုယ်ခန္ဓာ၊ ရောဂါ ခပ်သိမ်းရှောင်ခွာတိမ်း၊ ကင်းငြိမ်းလွန်ချမ်းသာ ”
မနှင်းနှင်းရေ မှတ်ထာရုံဘဲလား၊ တစ်ချို့အချက်လေးတွေက လက်တွေ့အတွက်လည်း အသုံးဝင်မှာပါဗျ။
ကိုယ့်အတွက်ပါ အသုံးချဖို့ ၂ ချက်ကို အလွယ် ပြင်မှတ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်..
ဒေါက်တို ခင်ဂဇက်ခ ရှင့်….
” ရေငတ်၊ရင်ပူ၊မောဟိုက်သူလေး ….အချိုကျွေး ကူပေး ”
” ခြေဆီ၊ချွေးခန်း၊အက်ကွဲနှုတ်ခမ်း…အသားပပ်လျှင် အချဉ် ဆက်ရှင် ”
ဟီဟိ…ကိုယ့်ဟာနဲကိုယ်တော့ မှတ်ရလွယ်လို့ ဟုတ်နေတာပဲ…
“နွေ-ချို၊ မိုး-ခါး၊ ဆောင်း-ချဉ် စား၊ မှတ်သား အဖြေဓာတ်´
ခြေထောက် သွေးပြန်ကြော (ပိတ်)အားနည်းရောဂါ အတွက်လဲ
မအိပြောတဲ့ ခြေထောက် သွေးပြန်ကြော (ပိတ်)အားနည်းရောဂါအကြောင်း လေ့လာ ဆွေနွေးပြီးရင် မျှဝေပေမယ်လေ၊ အခုတော့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ပါ။ ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်တယ်နော်။
ကိုယ်တိုင်လည်း.. ချောင်းဆိုး.. နှာစီး.. နေထိုင်ရတမျိုးဖြစ်နေလို့.. သတင်းကြည့်တာ.. ဖလူရာသီအ၀င်စောပါသတဲ့..
“ရေငတ်၊ ရင်ပူ၊ မောဟိုက် သူကို ကူညီနိုင်ရေး အချိုပေးလော့´´ နဲ့ “ခြေဆီမထွက် ချွေးခြောက်လျက်နှင့် အက်ကွဲနှုတ်ခမ်း ကြမ်းသည့်အသား ပပ်သူအားလျှင် အချဉ်ပေးလော့´´
Flu season gets early start
Poughkeepsie Journal	– ‎57 minutes ago‎
This year’s flu season is starting earlier and hitting harder than it has in almostadecade. “This is at leastamonth earlier than we would generally see the beginning of the uptick in cases,” said Centers for Disease Control and Prevention Director Thomas …
ဆောင်းတွင်းကြီးချွေးပြန်တာ ခဏခဏဖြစ်ရင် လေဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ခုမှဘဲသိတော့တယ်…
မှတ်သားစရာများမို့ မှတ်သားသွားကြောင်းပါ ….
ကျနော်က ဆောင်းတွင်းဆို ခြေဆီ အရမ်းထွက်ပြီး နှုတ်ခမ်းအမြဲကွဲပါတယ်..
ကျနော့် ဘော်ဒီကလည်း ကိုခင်ခသိတဲ့ အတိုင်း အပူသမားပေါ့
ရေသောက်နည်းတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းခြောက်၊ ကွဲပြီပဲ..
အချဉ် ဓာတ်ပါတဲ့ ကင်ပွန်ချဉ်ရွက်၊ မန်ကျည်းရွက်၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ မုန်ညင်းချဉ် စသည်တို့ကို ဟင်းရည်အဖြစ် သောက်သုံး စားသုံးသင့်ပါတယ် ဆိုတာ မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
.. အထိုင်များတော့ ဒူးအောက်ပိုင်း၊ ခြေသလုံးတွေ အမြဲ ညောင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တောင် ဇက်က ကျီးပေါင်းတတ်ချင်သလားမသိဘူး..
အညောင်းအကိုက်အတွက်တော့ တောင်ကြီး ရေပူစမ်းမှာစိမ်ခဲ့တာ အတော် သိသာတယ်ဗျ..
“စောစောအိပ်ထ၊ ပြုကျင့်က၊ တွင်းပကိုယ်ခန္ဓာ၊ ရောဂါ ခပ်သိမ်းရှောင်ခွာတိမ်း၊ ကင်းငြိမ်းလွန်ချမ်းသာ´ ဆိုတော့ သားလုပ်တဲ့သူနဲ့ ကွန်ပျူတာလု၊ အိပ်ဖြစ်တော့ ဆယ်ခွဲ၊ ဆယ့်တစ်… မနက် ရုံးကားထွက်တော့မယ်လို့ နှိုးမှ အိပ်ရာထပုံနဲ့တော့.. ဟီး ရောဂါတွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ်နေရဦးမှာပဲ ထင်ပါရဲ့..
ဟုတ်ကဲ့ပါ မှတ်ထားပါမယ်ရှင်။ မလာဖြစ်တာကြာပေမယ့် လွမ်းမိပါတယ်။ စာကောင်းလေးတွေ မဖတ်ရတာ အတော်ကြာတော့ ကူးယူသွားပါတယ်။ ခုတစ်လော သူငယ်ချင်းအဖေက မြိတ်မှာ လေဖြတ်ပြီးဆုံးတယ်လို့ သတင်းကြားရပြီး အိမ်ရှေ့အိမ်က အန်တီက လေဖြန်းသွားတယ်။ ဒါတောင် ရာသီဥတုက မအေးသေးဘူးနော်။ လေကိစ္စတွေပဲ ခုတစ်လောကြားနေရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး လေးလေးခရေ…
ဟုတ်ပ မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာသွားတယ်နော်။ ပြန်လည်ရောက်ရှိမန့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ
လေးခ ရေ ဒီပို့ စ်ကိုတော့ တော်တော်လေး ကြိုက်ပါတယ် ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ရေးထားတဲ့ဟာတော်တော်များများကို မသိခဲ့ဖူးပါ ။ အခုမှ သိရပါတယ်
သူကြီးကဖျော်သောက်မယ်ပြောလို့ ရွာသားခင်ခကလည်း ၀မ်းသာတယ်ဗျ။
ကိုကြည်ဆောင်ရေ အလုပ်မလုပ်ဘဲ ချွေးပြန်တတ်တာမျိုးနော် လေ့ကျင်ခန်းတို့ အလုပ်လုပ်လို့တို့ ကြောင့်ချွေးထွက်တာနဲ့ မရောလိုက်နဲ့အုံးနော်။
မှတ်ထားပြီး အသုံးတည့်ပါစေဗျာ ကိုမင်းနန္ဓာရေ။
ဟုတ် ဆရာပေကြိုက်တဲ့ပိုစ့်ဆိုလို့ ၀မ်းသာလျှက်ကျေးဇူးဗျာ။
ပြန်လည်မျှဝေဖို့ ကူးသွားပါတယ်လေးခရေ မိဗုံတို့ကတော့ ညနေတိုင်း ကျုံးဘေးလမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်
မနက်စောစောဆို မန်းလေးတောင်ပေါ်တက်ဖြစ်ပါတယ် ၀ီရိယတော့ ကောင်းသလားမမေးနဲ့ သူများအဆင်းဆို ကိုယ်က အတက်လမ်းတစ်ဝက်မှာ လျှာထွက်နေတုန်းရှိသေးတယ် အဆင်းမှာလည်း ဒလိမ့်ခေါက်ကွေး လိမ့်ကျဘူးပါတယ် လေးခလည်း လမ်းလျှောက်ချင်ရင် မန်းလေးကိုလာခဲ့နော် မိဗုံလိုက်ပို့မယ်
အဲ အခုရော မန်းလေးမှာနေနေတာလား လေးခ လမ်းလျှောက်ထွက်တာနဲ့ ကြုံရင် အကြော်ဝယ်ကျွေးရမှာနော်
အပြောအဆို အရေးအရတော့ မဗုံဗုံဟာ ခင်မင်စရာကောင်းမယ့် မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ခင်ခထင်ထားပါတယ်။ ဟုတ် အခုမန်းမှာနေတာပါ။ မန်းတောင်ဘက်တော့ အရင်မန်းတက္ကသိုလ်ထဲ နေခဲ့စဉ်တုန်းကတော့ sunday ဆို မိတ်ဆွေတွေ နဲ့ လျှောက်ဖူးခဲ့ပါတယ်၊ အခုမြို့သစ်ဖက်ပြောင်းပြီး တော့အလှမ်းဝေးသွားလို့ မလျှောက်ဖြစ်ပြန်ဘူးဗျ။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကြုံဆုံခဲ့ရင် ဟုတ်ကဲ့ပါ အကြော်နဲ့ကောင်ညှင်းပေါင်းကျွေးပါမယ့်။
လေးခင်ခရေ မှတ်သားသွားပါတယ် ရာသီဥတုတွေထဲမှာအေးမြပြီးခြောက်သွေ့တဲ့ဆောင်းကိုအကြိုက်ဆုံးပါ..။
အခုလိုဗဟုသုတရပြီး ဆင်ခြင်သင့်တာလေးတွေကို ပြောပြပေးနေတဲ့
မန်းဆောင်းကတော့အတော်အေးတယ်လေ။ ကျွန်တော်ကတော့အအေးကြိုက်လို့ မန်ဆောင်းကိုကြိုက်တယ်။ မရွှေကြည်လည်း အဆင်ပြေကျန်းမာလို့ ကံကောင်းပါစေနော်။
ကျနော်က လမ်းလျောက်ထွက်ရင် အနွေးထည်မ၀တ်ဘဲသွားတာ။
လမ်းလျောက်ဘက် အကိုကြီးက လည်ပင်းလေးကို မာဖလာပတ်တဲ့။
ဆောင်းရာသီအတွက် အဖိုးတန် ပိုစ့်လေးပါ..
“ ချွေးမထွက် သောသူများမှာ ကိုယ်တွင်းအောင်းနေသောအပူများကြောင့် ဆောင်းတွင်းတွင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ သလိပ်တံတွေးပျစ်ခြင်း၊ ဆီးပူခြင်း၊ ဆီးသွားများခြင်း၊ ရင်ပူရေငတ်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းကွဲခြောက်ခြင်း၊ သွားနှင့်သွားဖုံးတွင် အပူကန်ခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပွားခံစားရလေသည်။”
ဒီ အချိန်ကိုက် ကျန်းမာရေးပို့စ်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ…